အထူးသတိထားရန်! H1N1 ဝက်တုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦးရှိသွားပြီ – MEDIALANN
အထူးသတိထားရန်! H1N1 ဝက်တုပ်ကွေးကြောင့် သေဆုံးသူ ၃ ဦးရှိသွားပြီ
၁ စမ်းချောင်း၊ ရန်ကင်းလမ်းမှ အသက် ၆၀ အရွယ် အမျိုးသား၊
၂ ကော့မှူးမြို့နယ်တွင် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီး၊
၃ ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်းယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်တွင်နေထိုင်သော အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသား
လက်ရှိတွင် စောင့်ကြည့်နေရသော သံသယရှိ လူနာများရှိ
H1N1 ကူးစက်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သည်ဟုသံသယရှိသော အမျိုးသားတစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းအား ပို့ဆောင်ကူညီ
ရန်ကုန်ပြည့်သူ့ဆေးရုံကြီးတွင် ရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ကူးစက်ရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်ဟု သံသယရှိသော အမျိုးသားတစ်ဦး၏ရုပ်အလောင်းအား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) နိဗ္ဗာယာဉ်ဖြင့်ေ ရဝေးသုဿာန်မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်သို့ (အခမဲ့) ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။
ဖုန်း – ၀၁ ၇၀၉၂၇၇, ၀၁ ၇၀၄၇၈၄ သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သတင်း/ဓါတ်ပုံ – ပြန်ကြားရေးဌာန #FFSS
၁ စမျးခြောငျး၊ ရနျကငျးလမျးမှ အသကျ ၆၀ အရှယျ အမြိုးသား၊
၂ ကော့မှူးမွို့နယျတှငျ အသကျ ၂၉ နှဈအရှယျ ကိုယျဝနျဆောငျ အမြိုးသမီး၊
၃ ဒဂုံမွို့သဈဆိပျကမျးယုဇနဥယြာဉျမွို့တျောတှငျနထေိုငျသော အသကျ ၃၀ ကြျောအရှယျ အမြိုးသား
လကျရှိတှငျ စောငျ့ကွညျ့နရေသော သံသယရှိ လူနာမြားရှိ
H1N1 ကူးစကျရောဂါဖွငျ့ ကှယျလှနျသညျဟုသံသယရှိသော အမြိုးသားတဈဦး၏ ရုပျအလောငျးအား ပို့ဆောငျကူညီ
ရနျကုနျပွညျ့သူ့ဆေးရုံကွီးတှငျ ရာသီတုပျကှေး H1N1 ကူးစကျရောဂါဖွငျ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့သညျဟု သံသယရှိသော အမြိုးသားတဈဦး၏ရုပျအလောငျးအား နာရေးကူညီမှုအသငျး(ရနျကုနျ) နိဗ်ဗာယာဉျဖွငျ့ေ ရဝေးသုဿာနျမီးသွင်ျဂိုဟျစကျသို့ (အခမဲ့) ပို့ဆောငျကူညီပေးခဲ့ပါသညျ။
ဖုနျး – ၀၁ ၇၀၉၂၇၇, ၀၁ ၇၀၄၇၈၄ သို့ဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။
သတငျး/ဓါတျပုံ – ပွနျကွားရေးဌာန #FFSS